CPL T20 : सन्दिपको जमैकाको सातौँ खेल आज पोलार्डको ट्रिनबागोसंग ( सम्पूर्ण जानकारी ) – WicketNepal
WicketNepal Staff, २०७७ भाद्र १६, मंगलवार ०८:२९
करेबियन प्रिमियर लिग टि-२० ( सिपिएल ) अन्तर्गत नेपाली खेलाडी लामिछानेले प्रतिनिधित्व गरिरहेको टिम जमैका तलावाजले आफ्नो सातौँ खेलमा मंगलबार राति काइरन पोलार्ड कप्तानीको ट्रिनबागो नाइट राइडर्ससंग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। लिगमा एक-अर्का बिरुद्ध दुइ टिम दोश्रो पटक आमने-सामने हुन लागेका हुन्।
लिगमा शानदार प्रदर्शन गर्दै अपराजित ट्रिनबागो ६ खेलमा १२ अंक सहित अंकतालिकाको शिर्षस्थानमा रहेको छ। अर्कोतर्फ जमैका समान ६ खेल खेल्दा ३ जित र ३ हार पछि ६ अंक बटुल्दै चौथो स्थानमा छ। लिगकै शिर्ष स्थानमा रहेको टिमलाई पराजित गर्दै जमैका शिर्ष-४ भित्र स्थान सुरक्षित गर्दै लिग जित्ने दावेदारी प्रस्तुत गर्न चाहन्छ।
अर्कोतर्फ ट्रिनबागो अपराजित यात्रा कायम राख्दै जमैका बिरुद्ध यस अघिकै नतिजा दोहोर्याउन चाहन्छ। जमैकाले अन्तिम पटक ट्रिनबागोलाई २०१८ मा पराजित गरेको थियो जसपछि लगातार ४ खेलमा ट्रिनबागोले जमैकालाई पराजित गरेको छ। लिग अन्तर्गत यस अघिको खेलमा जमैकालाई ट्रिनबागोले ७ विकेटले पराजित गरेको थियो।
मिति र समय : सेप्टेम्बर १, राति ७:४५ बजे ( नेपाली समय ) , १०:बजे बिहान ( स्थानीय समय )
लिगमा जमैकाको हालसम्मको नतिजा ( ६ खेलमा ३ जित र ३ हार )
ग्लेन फिलिप्स : न्युजिल्यान्डका दायाँ हाते विकेटकिपर ब्याट्सम्यान लिगमा शानदार लयमा छन्। लिगको सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान फिलिप्सले जमैकाको सेन्ट किट्स बिरुद्धको जितमा अविजित ७९ रन बनाएका थिए। यस अघि उनले सेन्ट लुसिया जुक्स्त बिरुद्ध ४४, ट्रिनबागो नाइट राइडर्स बिरुद्ध ५८ रन तथा गायना बिरुद्ध २६ रन बनाएका थिए। ६ खेलमा उनले २ अर्धशतक मद्दतले २०७ रन बनाएका छन्। यस क्रममा जमैकाका ओपनरले ४१.४० को औशत र १२७.७७ को स्ट्राइक रेटले रन बनाएका छन्।
मुजिब उर् रहमान : प्रतियोगिताकै सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान मात्रै हैन सर्वाधिक विकेट लिने बलर पनि जमैकाकै अफ स्पिनर मुजिब उर् रहमान हुन्। अफ्गानी स्पिनरले ६ खेलमा १३ विकेट लिईसकेका छन् जुन क्रममा मात्र ३.८७ प्रतिओभर रन खर्चेका छन्। टिमकै अर्का स्पिनर सन्दिप लामिछाने र मुजिबको जोडीले लिगमा विकेट मात्रै हैन कन्जुस्याइँपूर्ण बलिंग पनि गरेका छन्। सन्दिपले ९ विकेट लिईसकेका छन्। मुजिबले गायना बिरुद्ध लिगको दुवै खेलमा ३/३ विकेट तथा बार्बेडोस बिरुद्ध पनि ३ विकेट लिएका थिए। यस क्रममा मुजिबले प्रत्येक ११ बल गर्दा १ विकेटको स्ट्राइकर रेटमा बलिंग गरेका छन्।
ट्रिनबागोको लयमा रहेका २ खेलाडी
१. डेरेन ब्राभो : टिमका मध्यक्रम ब्याट्सम्यान ब्राभोले खेलेको ६ खेल मध्ये ३ खेलमा अविजित रहँदै ब्याटिंग गरेका छन्। ६ खेलमा उनले ५१ को औशतले १५३ रन बनाउदै सर्वाधीक रनकर्ताको सूचीमा सातौँ स्थानमा रहेका छन्। दायाँ हाते ब्याट्सम्यानले यस क्रममा बार्बेडोस बिरुद्ध अविजित ५४, गायना बिरुद्ध ३० र अविजित २६, सेन्ट लुसिया बिरुद्ध अविजित २३ तथा बार्बेडोस बिरुद्ध ६ रन बनाएका थिए।
२. काइरन पोलार्ड : कप्तान पोलार्डले ६ खेल खेल्दा ५ खेलमा ब्याटिंग गर्दै १३२ रन बनाएका छन्। उनले यस क्रममा ४४ को औशत र २०६.२५ को उत्कृस्ट औशतले रन बनाएका छन्। बार्बेडोस ट्राइडेन्ट बिरुद्ध अन्तिम खेलमा दायाँ हाते ब्याट्सम्यानले अपत्यारिलो ब्याटिंग गर्दै मात्र २८ बलमा ७२ रन बनाएर अपत्यारिलो जित दिलाएका थिए। यस्तै उनले बार्बेडोस बिरुद्धनै अघिल्लो खेलमा पनि अविजित ४१ रन बनाएका थिए।
प्रतियोगितामा सन्दिप लामिछानेको प्रदर्शन
लिगमा शानदार लय देखाइरहेका नेपाली लेग स्पिनरले ६ खेलमा ९ विकेट लिईसकेका छन्। यस क्रममा उनले मात्र ४.८३ रन प्रतिओभर खर्चिएका छन् जुन लिगकै आठौँ उत्कृस्ट किफायती बलिंग हो। सर्वाधिक विकेटकर्ताकोक सूचीमा समेत सन्दिप ९ विकेट सहित राशिद खानसंगै चौथो स्थानमा रहेका छन्।
लिगको मध्यम ओभरहरुमा बलिंग गरिरहेका सन्दिपले पहिलो खेलमा सेन्ट लुसिया बिरुद्ध १ विकेट, दोश्रो खेलमा ट्रिनबागो बिरुद्ध १ विकेट, तेश्रो खेलमा गायना अमेजन वारियर्स बिरुद्ध २ विकेट, चौथो खेलमा गायना बिरुद्धनै १ विकेट, पाँचौ खेलमा बार्बेडोस बिरुद्ध २ विकेट तथा छैठौं खेलमा सेन्ट किट्स बिरुद्ध २ विकेट लिएका थिए।
सन्दिपले प्रतियोगितामा ९ विकेट लिएका छन्